मांसाहारी आन्दोलन जिन्दावाद ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, माघ ११, २०७७ मा प्रकाशित
देखिस् भिरघरे हाम्रो जुलुश ! जनसागर भनेको यस्तो हुन्छ । चुनाप भए हाम्रो बहुमत, चुनाप नभए हाम्रो ठूलो पार्टी ! अब त प्रष्ट भयो नि ! सरकार अब हाम्रो बन्छ ! हाम्रो प्रचन्न काम्रेडले भनी सके । केही नभए मांसाहारी आन्दोलन भनेर ।
हो काका ! २०४८ सालमा पूर्वको झापा जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो जुलुश र आमसभा सूर्यबहादुर थापाको भएको थियो । चुनापमा भोट चै जिरो दिएछन् । तिमार्को हालत पनि त्यस्तै हुने देखियो । अब मांसाहारी आन्दोलन चैं तिमार्को पेशा भाकोले अस्वभाविक हुँदै होइन । स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्री भैसकेको मान्छेले मांसाहारी आन्दोलन गर्ने भनेर भासन गरेपछि अरुले मान्छे मार्ने काम गर्ने त हो । तर, अब पहिले जस्तो सजिलो चैं छैन ।
जेसुकै भन भिरघरे ! ठोक्ने हो अब । अस्ति काठमाडौंमा देखिस् होला नि, मान्छे नाथे त प्रचन्नका पछिपछि हुरुरु । साँच्चै भन्ने हो भने विश्वको महान नेतामा प्रचन्न मात्र देख्छु म त ।
खुस्केट कुरा गर्छन् यी बुढा पनि ! के मानेमा प्रचन्नलाई महान मान्नु पर्ने ? त्यो पनि भन अनि पो मान्छेले पत्याउछन् । हावाको भरमा कसले पत्याउछ !
हेर झुम्री ! माओवादी सशस्त्र युद्ध गर्ने व्यक्ति, प्रचन्न पथका निर्माता, कम्युनिष्ट विचारमा नयाँ सिद्धान्त प्रस्तुतकर्ता …!
काका शब्द मिलेन । सशस्त्र आतंकका सरदार, १७ हजार निर्दोष जनताका नरसंहारक, नरभक्षी नेता…!
नचाहिने कुरो नगर भिरघरे ! पाँच हजारभन्दा बढी हामीले मारेको छैन भनेर प्रचन्न काम्रेडले भनीसकेको अवस्थामा तिमारु फेरि १७ हजारको रटान लगाउँछौ। अनि यस्तो आरोप लागेपछि ‘साकाहारी आन्दोलनले पार लाग्दैन मांसाहारी आन्दालन गर्नु पर्छ’ भनेर जनतालाई प्रचन्नले आव्हान गर्नु कुन ठूलो कुरो हो !
नमस्कार है काका-काकी, भिरघरे दाजु ! बडो गम्भीर छलफल हुँदै छ कि क्या हो ?
अहो ! ठिक बेलामा आए छ हौ झम्पाट ठूले । तेरी झुम्री काकी र भिरघरे मिलेर प्रचण्डको उछितो काड्दै छन् । प्रचन्न र माधवजी मिलेर अब के गर्छन् लु भन भतिज !
अब कुरो किल्लोर छ । प्रचन्न काम्रेडले सागे होइन बाघे आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । अब साकाहारी होइन मांसाहारी आतङ्क सिर्जना गर्ने भनी सकेका छन् । हामी अब पुरानै माओवादी लयमा फर्केर शान्तिपूणर् उग्रता प्रदर्शन गर्ने छौं । ओलीले हामीलाई केही जस्तो ठानेनन् । अब देख्नेछन् हाम्रो पाउर ! कम हेपेको छ । प्रचन्न जस्तो सर्वहारा वर्गको महान नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनेहर्ले अब देख्ने छन् । म पनि आव्हान गर्छु । सबै आउनुहोस् मांसाहारी उग्र आन्दोलनमा सहभागी हुन ।
ठिक भन्यो झम्पाट भतिजले । अब फेरि भाटा, सुतली वंम, चन्दा, वन्दूक, मन्दिर, स्कुल, पुल भत्काउने काम भन्ने दिन आउला जस्तो छ । अनि भतिज यो क्षेत्रको चन्दा असुल्ने र बैंंक लुट्ने कामको कामण्डर चै मै हुन्छु नि । यो कुरो अहिले देखि भन्देको छु ।
एक-एकवटा कामको कमाण्ड गर्नु पर्छ । अनि हाम्रो पनि शहरमा घर, तराईमा जग्गा, वैंकमा पैसा हुनेछन् । पहिला हाम्रा काम्रेडहर्ले कम्ता कमाएनन् बोरामा खाँदेर हौ पैसा त !
फेरि त्यसै गर्ने हो झम्पाट भाइ !
जनता यिनै हुन कार्वाही सुरु गरेपछि भागेर सदरमुकामतिर जान्छन् । भाग्नु भन्दा चन्दा दिन थाल्छन्। उभिण्डे खोलाको पुल भत्काई दिए पछि यो गाउँ कब्जा, हुर्दुङ्ग खोलाको झोलुङ्गे पुल भत्काउनुपर्छ । यो दुईटै पुल ओलीले बनाउन लगाको । हाम्रो प्रचन्नले बनाउन लगाको भा त संरक्षण गर्नुहुन्थ्यो । त्यो स्कूल र मन्दिर पनि हान्नु पर्छ ।
यस्तो गरेर राष्ट्रको विकास, समाजको उन्नति हुने भए त तिमारुले पहिले पनि गरेकै थियो नि । तिमारु आफूले पनि बनायनौ भत्कायौ मात्र अहिले बनाइ देको पनि भत्काउने हो भने तिमार्को दिन पनि अब आए जस्तो छ । छिछिभिराको प्वाँख पलाए पछि यस्तै हो ।
नचाहिने कुरो नगर भिरघरे । अब एमालेको त्यस्तो दह्रो सङ्गठन त हाम्रो प्रचन्नले तहसनहस बनाई दिए, माधव नेपाल मै हुँ भन्दै डुग्रिन्थे तिनलाई त घड्याप्प घोडा चडे । अब नेकपा र सूर्य चिन्ह हाम्रो भयो भने देखाउनाकै लागि मात्र भए पनि मनमोहन र मदन भण्डारी पनि हाम्रै पार्टीको शिखर पुरुष भनेर घोषण गरेर उनार्को फोटो झुण्ड्याउने छौं । तिमार्को कांग्रेसलाई पनि प्रचन्न काम्रेडले थाङ्नामा सुताई दिन्छन् ।
मनको लड्डु घिउसंग भनेको यही हो । चुनाप हुन्छ हुन्छ । सूर्य चिन्ह र नेकपा पनि तिमार्ले पाउदैनौ । धेरै जिते तीनवटा सिट जित्छौ । अरु सप्पै हाम्रो कांग्रेस र नेकपा ओली पक्षले जित्छ । होइन तिमारु माओवादीलाई अहिले अएर सूर्य चिन्ह प्रति किन आशक्ति । तिमार्कै हँसिया हथौडाले काम दिएन ?
हेर भिरघरे । पहिलाको एमालेका राम्रा कुराहरु हामी सप्पै खोस्छौं । कम हेपेको थियो हामीलाई ! त्यो सम्झिदा अहिले पनि दाह्रा किट्न मन लाग्छ । काम सकिएपछि माधवहर्लाई पनि ‘आफल तेरो ठाँडो’ बनाइन्छ । हाम्रो पेरिस डाँडोलाई ‘रुवावासी डाँडो’ बनाउने यिनै पापीहरु हुन ।
हौ काका तिमारु माओवादीले जतासुकै च्यान डाँडो बनाउदा त नेता बनेका छन् । एमालेहर्ले रुवावासी डाँडो बनाउदा राम्रै त भो नि ।
जे सुकै भन तिमारु हाम्रो प्रचन्नले त्यही रुवासी डाँडोबाट मांसाहारी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरी सके । आज म पनि घोषणा गर्छु मांसाहारी आन्दोलन जिन्दावाद !
नेकपाको कुनै विवरण परिर्वतन, संसोधन वा हेरफेर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएन (पूर्ण पाठ)- निर्वाचन आयोग